तपाईले कहिलै क'न्डमको म्याद हेरेर किन्नु भएको छ ? ख्याल गर्नुभएन भने यतिसम्म हुनसक्छ !
शुक्रबार ७ कार्तिक, २०७७
काठमाडौ । बच्चा जन्माउने नियन्त्रणका लागि महिला वा पुरुष दुबैले क’न्डमको प्रयोग धेरै गर्छन । अनेकौँ सर्ने रोग र अनावश्यक गर्भावस्थाबाट बच्न क’न्डमको प्रयोग धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जहाँसम्म, यससँग सम्बन्धित धेरै चीजहरू छन् जुन मानिसहरू जान्दैनन् ।
केही व्यक्तिलाई यो पनि जानकारी हुँदैन कि क’न्डमको म्याद सकिने मिति हुन्छ कि हुँदैन ? यदि म्याद समाप्त हुन्छ भने, यो प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? क’न्डम किन्नु भन्दा पहिले यी कुराहरु जान्नु राम्रो हुन्छ । आज हामी यी समस्याहरुको समाधान लिएर आएका छौँ ।
अन्य चिकित्सा उत्पादनहरु जस्तै क’न्डमको पनि एक्यपायरी डेट हुन्छ । जब यो खरीद गर्नुहुन्छ तब प्रयोग गर्ने अन्तिम मिति वा प्याकेट वा बक्समा म्याद समाप्त हुने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यो कुरा अवश्य देख्नै पर्छ । त्यहाँ अन्य कारणहरु पनि रहेका छन् जसले क’न्डमलाई छिटो बिगार्न सक्छन् ।
यदि क’न्डमलाई पर्स, गोजि, वालेटमा राखिएको छ भने, लगातार घर्षणको कारण क्षति हुने खतरा हुन्छ । साथै, उच्च गर्मी र आर्द्रता मा, यसको गुणवत्ता पनि असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
क’न्डमहरू त्यस्ता प्राकृतिक सामग्रीबाट बनेको हुन्छ, जसको छिटो समयावधि सकिन्छ । सिथेन्टिक सामग्रीबाट बनेको क’न्डमको लामो शेल्फ लाइफ हुन्छ । तिनीहरू प्रायः पाँच बर्षसम्म सुरक्षित हुन्छन् ।
यदि बच्चा बनाउने पदार्थ नियन्त्रक रसायन क’न्डम बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको छ भने यसको शेल्फ लाइफ कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा क’न्डम लिँदा यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस्।
यदि क’न्डमको म्याद सकिएको छ, तब पनि प्रयोग गर्दा कुनै अर्थ बिना समस्या सिर्जना गर्न सक्दछ । म्याद नाघिसकेपछि यसको सामग्री कमजोर हुन थाल्छ । यसकारण लिएको स्वाद वेकार हुने निश्चित छ । किनकी यो उत्कर्षको बीचमा फुट्ने वा टुक्रने समस्या आउनसक्छ ।